२३ वर्षीया एलिसा गौतमले फेसबुकबाट लाइभ गरेर अस्ताइन – Enepali News
July 2, 2020 163
दाङकी एक युवतीले फेसबूक लाइभमा आएर देहत्याग गरेकी छिन् । अन्दाजी २३ वर्षीया युवतीले देहत्याग गरेकी हुन् । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–५ रानीजरुवामा बस्दै आएकी अन्दाजी २३ वर्षीया एलिसा गौतमले देहत्याग गरेकी हुन् । बुधवार राति फेसबूक ला’इभ ग रेर देहत्याग गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरले जनाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रहरी प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले ती युवतीले देहत्याग गरेको पुष्टि गरे । युवतीले किन देहत्याग गरिन् भन्ने खुलेको छैन । मृ’तक युवतीको शव पो’ष्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुल्सीपुरमा राखिएको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले यस्तो गर्नु पुर्व एउटा गित बजाएकी थिइन् । सम्झना बिर्सना यो सिउँदो जोगाउनु, मेरो ला’सको मलामी तिमि हुनु भन्दै उनले संसारबाट बिदा लिएकी हुन् ।
देखाएर देहत्याग, बाँच्ने आशा / गोपाल ढकाल,मनोविद्
घर, परिवार, साथीभाइ, समाज लगायत कसैले मलाई माया गरेको छैन भनेर पनि कतिपयले अरुलाई देखाएर देहत्याग गर्न सक्छन् । कतिपय सेलिब्रेटी लगायतले देहत्याग गर्दा चर्चा पाएको देखेर तथा सुनेर पनि सबैलाई देखाएर देहत्याग गर्दा चर्चा पाइने रहेछ भन्ठानेर पनि अरुले थाहा पाउने गरी यस्तो गरेको पाइन्छ । म म’र्दा सबैले थाहा पाउँछन् र म चर्चित हुन्छु भनेर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लाइभसमेत गरेर देहत्याग गरेको पाइन्छ ।
तर त्यसरी सामाजिक सञ्जालबाट लाइभ गरेर देहत्याग गर्नु भनेको कसैसँग बाँच्नका लागि सहयोग मागिरहेको पनि हो । सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट देहत्याग गर्ने बारेमा अरुलाई पनि जानकारी दिएपछि मलाई कसैले बचाउन आउँछन् र म बाँच्छु भन्ने मानसिकता पनि हुन्छ ।
सबैलाई थाहा दिएपछि म’र्नबाट मलाई रोक्छन् भनेर मद्दत मागेको हो । त्यसरी लाइभ गर्दा पनि कोही सहयोग गर्न नआाएपछि अब मलाई सहयोग गर्ने कोही पनि रहेनछ भनेर अन्त्यमा म-र्ने निर्णय गर्न सक्छन् । कतिपयले रिसले म’रेर देखाइदिन्छु भन्ने सोचेर पनि सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट सार्वजनिक गर्छन् ।
डि प्रेसनले : सेरोटोनिन् र डोपामिन जस्ता हार्मोनको कमीले मानिसलाई डि प्रेसन हुन्छ । डि प्रेसन लगायतको मानसिक रोगका कारणले योजनाबद्ध तरिकाले मानिसले देहत्याग गर्ने सम्भावना हुन्छ । डि प्रेसनमा मानिस दुःखी हुन्छ । आफ्नै जीवनदेखि दिक्क लाग्न थाल्छ ।
संसारमा एक्लो महसुस गर्छ र मानिसले यो बाटो रोज्छ । डि प्रेसन भएका व्यक्तिले मर्ने बारेमा पूर्वतयारी गर्नुका साथै योजना बनाएर देहत्याग गर्छ । म म’र्दैछु भन्ने निर्णय गरेको हुन्छ ।
म’र्नुपूर्व योजना बनाएका व्यक्तिमा म देहत्याग गर्ने समयमा कसैले मलाई देख्छ, थाहा पाएपछि मलाई बचाउन आउँछन् अनि म बाँच्छु भन्ने पनि हुन्छ । कतिपय योजना बनाएका व्यक्तिले पनि बाँच्ने अवसर पर्खिरहेका हुन्छन् । कसैलाई देखाउनका लागि यो नाटक गर्ने व्यक्तिले बाँच्ने आशामा अरुले देख्ने किसिमले गर्न खोज्छन् र कोही बचाउन नआएका खण्डमा देहत्याग हुन्छ ।
Prevआज भर्खर रोपेको धान सलह किरा आएर सखाप
Nextसाढे ३ खर्ब मूल्यको ८३ टन सुन नक्कली ! सुन भनेर राखेको तामा निस्कियो
कोरोना पुष्टि भएपछि एक युवकले गरे आत्महत्या
बल्ल डराए ट्रम्प : इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा संकटकाल घोषणा (3400)
तपाईंको यो वर्ष कस्तो हुँदैछ ? हेर्नुहोस् ओजराज उपाध्यायले लेखेकाे वार्षिक राशिफल (1916)
ॐ ॐ ॐ….२०७७ सालमा यी राशिहरूको चम्किँदै छ भाग्य, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल (1902)
O M G << हेलिकप्टरबाट उद्दार गरिएकी गर्भवती महिलाको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु: (1896)
सरिता गिरीविरुद्ध रमेश पर्साइले मुद्दा हाल्दै, साथ दिनेले सेयर गराै (1668)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1488)
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1433)